Nhau - 2020, inogona kunge iri gore rekupokana neBitcoin
Munguva pfupi yapfuura, Bitcoin inoita kunge iri padambudziko. Kunyangwe hazvo mutengo weBitcoin uchiratidzika kunge unonyanya kushanduka, iyo cryptocurrency yanga iri munguva yekubatanidzwa mumavhiki maviri apfuura, mushure mekurova kwenguva pfupi madhora mazana manomwe nemakumi mana nemakumi mana. Kufamba pakati penzvimbo yepamusoro ye $ 6,000 nenzvimbo yakaderera ye $ 7,000. Tevere, Bitcoin ichaenda kupi?
Kwenguva yakareba, vanhu vanga vachikahadzika nezve kukosha kweiyo cryptocurrencies. Ivo vakanyora Bitcoin "inononoka" kutapisa kumhanya, Ethereum hacks, uye zvimwe "zvikanganiso" muindasitiri, vachiti kirasi yeasset iyi haina ramangwana. Nekudaro, munyika yanhasi ine mhirizhonga, iyo macroeconomic landscape iri kusimukira, kunyanya cryptocurrencies, kunyanya Bitcoin.
Sekureva kweshumo rakaburitswa neBloomberg, Bitcoin iri kuvaka simba remusika mukuru wenzombe. Chirevo chakasimbisa kuti 2020 ichave iri gore apo Bitcoin inova yegoridhe yedhijitari. "Gore rino muyedzo wakakosha wekuchinja kweBitcoin kuenda pamari yemari yakaita segoridhe, uye tinotarisira kuti ipase bvunzo iyi."
Huwandu hwevanhu vanofarira blockchain uye cryptocurrency iri kuwedzera
Sekureva kweongororo yakaitwa naPaxful, wepasi rose P2P bitcoin musika wekutengesa, maAmerican vane ruzivo rwemakristcheni vakaratidza kufarira kuwedzera mu blockchain tekinoroji uye cryptocurrencies. Iri boka revanhu riri kuwedzera kuona zvinhu zvemadhijitari sekutsiva iyo "isina kukwana" tsika yechinyakare yemari.
Zvinoenderana neshumo yekutsvagisa yakaburitswa muna Kubvumbi 23, mari yemari iri kukura seimwe pfuma. Vanoda kusvika makumi mashanu kubva muzana yevakabvunzwa vanotenda kuti zvechimbi-chimbi mukati mechinyakare zvemari sisitimu zvinoshanda semukana wekubatsira vanhu kusimudzira kutarisisa kwavo kuBitcoin seimwe nzira.
Maererano neongororo, kushandiswa kwakanyanya kweBitcoin kunosanganisira kubhadhara kwehupenyu chaihwo (69.2%) uye kurwisa inflation nehuwori (50.4%).
Artur Schaback, mukuru anoshanda uye muvambi webasa raPaxful, akadaro mukubvunzurudzwa: “Zvinokosha kucherechedza kuti vanhu vazhinji vanotenda kuti kurera vana vazhinji kunozowanikwa mumakore matanhatu kusvika gumi anotevera. Pane kupokana, vamwe vakapindura vanotenda kuti imwechete Iyo cryptocurrency bubble ichaputika mukati menguva pfupi. Ndine tariro yemamiriro ekutanga, saka ndinofunga kuti seindasitiri, isu tinofanirwa kushandira kugadzira zvimwe zvigadzirwa uye kushandisa zvimwe zvigadzirwa kune chaiwo-hupenyu mashandisiro kesi. Batsira kukurumidza kuita vana vakawanda. ”
Muchirevo chechirwere chepasi rose chekorona, Paxful anotenda kuti ese macryptocurrency uye echinyakare masystem emari ari kuyedzwa, izvo zvinotsanangura kune imwe nhanho nei mutengo weBTC uri kukwira sezvo BTC inova nzvimbo yakachengeteka.
Schaback akasimbisa kuti zvichienzaniswa nezvakaitika kare, kuziva kwevanhu kweBitcoin hapana mubvunzo kuti kwakakwira ikozvino. “Ndinoyeuka patakatanga, hapana aiziva nezveBitcoin uye akatombofunga nezwi rekuti 'Bitcoin'. Zvisinei, kubva pamigumisiro yekuongorora gore rino uye gore rapera, vanhu vazhinji vakanzwa nezveBitcoin. Vanhu vazhinji vanozvibatanidza nepfungwa dzakasiyana senge mari uye hunyanzvi Tichine rwendo rurefu rwekufamba, asi ndinoshuvira kuona zvimwe zvigadzirwa zvinobatsira kuwedzera.
Nezve zvipingamupinyi zvekutora vana, ongororo iyi yakasimbisawo kuti 53.8% yevakabvunzwa vanotenda kuti kushayikwa kweruzivo rwakakodzera kunotadzisa kufambiswa kwemari yemadhora.
Sekureva kweshumo, vakapindura vanotenda kuti zvinhu zvikuru zvinobatsira kuwedzera mwero wekutora ndeyekuchera kwemafoni, kudzoreredzwa kwemaalcoins, kudyara kwemasangano uye kushandiswa kwekambani kwe blockchain tekinoroji.
Paxful's COO akataura nezvematambudziko emangwana achiti: "Dambudziko hombe richiri ruzivo nezve cryptocurrency pachayo. Isu tinoziva kuti vanhu vazhinji vakanzwa nezvazvo, asi ini ndinofunga ndicho chikonzero chisiri icho, sekubhejera uye Chikamu chehutsotsi. Nekuda kweizvi, vateereri vazhinji vachiri nepfungwa yekutya. Seindasitiri, iri ndiro dambudziko redu guru. ”
Nguva yemberi yeBitcoin inoramba ichidzoka
Mushure mekusangana nekuderera kwehuwandu hwekutengesa mumavhiki mashoma apfuura, Bitcoin ramangwana rekutengesa vhoriyamu yatanga kuwedzera. Zvinoenderana neazvino data yeCME, zvigadzirwa zvaro zvakarova nyowani nyowani mwedzi wapfuura maererano nemaakaundi anoshanda, ine huwandu hwegore hwekukura hwe161%
Maererano nemishumo, mutongi weUS, Securities and Exchange Commission (SEC) yakasimbisa kuti Medallion Fund (Medal Fund) iri pasi peRenaissance Technologies ikozvino inogona kupinda mumusika unowedzera weBitcoin. Iyi homwe inozivikanwa neyakajeka mari yekudyara kudzoka kuita kusvika parizvino gore rino.
Zvinoenderana neruzivo, Renaissance Technology ichapa CME Boka remari-yakagadziriswa bitcoin ramangwana chibvumirano, CME ndeimwe yevaviri vekutanga bitcoin remangwana vanopa.
Iyo $ 10 bhiriyoni hedge fund pasi peRenaissance ichangobva kuita mukurumbira munhau. Kunyangwe hosha itsva yekorona yapinda mumisika yepasi rose mukunyongana kusingaperi, homwe yakawana 24% kukura kusvika parizvino gore rino. Sekureva kweCNBC, chikamu chekutungamira cheMedal Fund chakatenderedza US $ 10 bhiriyoni, yakaenzana neinenge RMB 70 bhiriyoni. Inofungidzirwa nezviyero zve manejimendi zvemakumi emabhiriyoni emadhora, mari yegore rino ingangoita 3.9 bhiriyoni emadhora ekuUS, akaenzana neanosvika mabhiriyoni makumi matatu emadhora; mushure mekubvisa fizi yemanejimendi uye kugoverana kwekuita, homwe yacho ine purofiti yemari inosvika mabhiriyoni maviri nemazana mana emadhora ekuAmerica, zvakaenzana neanosvika mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora.
Sekureva kweWall Street Journal, kubva muna Kubvumbi 14, iyo medallion fund ine goho rinowedzera re39% gore rino. Kunyangwe mumusika waMarch "Great Falls" iyo Buffett yaasina kuona muhupenyu hwake, iyo Medal Fund ichiri kuwana 9.9%. Mumwedzi mumwe chete, S & P 500 yakawira 12.51%, uye iyo Dow yakawira 13.74%, ese ari maviri achirova kuderera kukuru kwemwedzi kubva muna Gumiguru 2008.
Hapana mubvunzo kuti iyi medallion fund, iyo isina kumbobvira yarasikirwa nemari kubva payakatangwa uye inogona zvakare kuwana kudzoka-kune-zuva kudzoka panguva yedambudziko rehupfumi, inomiririra kuzivikanwa kweguta rechinyakare mumusika we cryptocurrency, uye inosungirwa kuunza hombe mabhenefiti kune iyo CME Bitcoin ramangwana musika. fluidity.
Isingagumi kurerutsa mutemo kunogona kukurudzira Bitcoin kupokana
Kunyangwe kukwira kwakasimba mumitengo yemidziyo, kusanganisira madhijitari, maonero ehupfumi hwepasi rose anoramba achinetseka. Mumavhiki mashanu apfuura, vashandi vanosvika mamirioni makumi maviri nematanhatu vakanyorera kushaya mabasa muUnited States chete. Padanho rekambani, makambani ekutsvagira anotarisira kuti kambani irasikirwe nemabhiriyoni emadhora mumari.
Naizvozvo, hazvishamise kuti mabhanga epakati nehurumende pasi rese vakaita kuyedza kuponesa vanhu, makambani, uye makambani ese.
Kuitira kudzikisira kutyisidzira kweupfumi kwakatarisana neUnited States nekuda kwekukanganiswa kwedenda, Fed haina kumboita "danho hombe". Manheru aKurume 15, iyo Fed yakacheka chimbadzo kusvika zero uye yakatanga chirongwa chakakura chekurerutsa cheUS $ 700 bhiriyoni. Musi waKurume 17, Federal Reserve yakatanga chirongwa cheCommercial Paper Financing Facility (CPFF) uye nePrimary Dealer Chikwereti Mechanism (PDCF) kupa mari kune vanotengesa mapepa. Musi waKurume 23, Federal Reserve yakaburitsa mutemo usingagumi wehuwandu hwekurerutsa (QE) ndokutanga "kutenga" zvese zvigadzirwa zvechikwereti pamusika kunze kwemasheya ekupa rutsigiro rwakakwana rwemari kumusika.
Vanhu vazhinji vanotenda kuti zviito zvinotevera zveFed zvinongoratidzira kukomba kwemamiriro eUS.
Bhanga reJapan (BOJ) rakasimbisawo maitiro aya. Sekureva kweNikkei Asia Review, ichitsanangura vanhu vanoziva nezvenyaya iyi, Bhanga reJapan riri kutsvaga kutenga kusingagumi kwemabhondi ehurumende yeJapan mukuyedza kusimudzira hupfumi. Iyo zvakare inotarisira kuwedzera chirongwa chayo chakareruka chekuwedzera zvakapetwa kutengwa kwemabhizimusi emakambani uye pepa rekutengeserana.
Kunyangwe United States yatanga chirongwa chakatengwa chekutenga mabond, VaMax Bronstein, nhengo yeboka rekudyara mari yekambani yemari yeCoinbase, akasimbisa kuti "hurongwa hwazvino hwaparara zvachose."
Vanhu vakawandisa vanotenda kuti yakatemerwa matunhu uye inoshomeka crypto zvinhu zvichabatsirika kubva kune ino maitiro kune isingazivikanwe mari uye fiscal minda zvichienzaniswa nemari yefiat yemabhanga epakati.
Aimbova mukuru weGoldman Sachs uye maneja wehange fund Raoul Pal akatsanangura muchinyorwa chaApril che "Global Macro Investors" tsamba kuti anofunga kuti tinogona kuona "hurongwa hwedu hwemari hukundikana" kana "chimiro chemari chiripo chiripo." “.
Bitcoin ichabatsirwa zvakanyanya kubva mukuchinja kubva padanho repamutemo kuenda kuchinhu chedigital ecosystem. Nezve Bitcoin, Pal akanyora kuti: "Iyi yakazara, yakavimbika, yakasimbiswa, yakachengeteka, yezvemari uye yekuverenga dhijitari kukosha system. Iyo ramangwana reedu rese rekutengesa system, iyo mari yacho pachayo uye yayo yekushandisa chikuva haina kumira ipapo. "
Akawedzera kuti Bitcoin inogona kusvika $ 100,000 mumakore maviri anotevera, uye kutokanda kapu yemamiriyoni gumi emadhora kana macro maonero achinja zvakanyanya.
Mushure memutemo "usingagumi wehuwandu hwekurerutsa", ko Bitcoin icharamba iri "pfuma yakachengeteka" pasi pematambudziko emari? Panyaya iyi, Mike Novogratz, CEO weGlobal Dhijitari, akafungidzirawo kuti Bitcoin inogona kutevera goridhe nemutengo unokosha, kunyanya nekuti zvinhu izvi zviviri zviri kushomeka.
Xu Yingkai, mubatsiri wekutanga weBlockVC, akataura paWeibo kuti Bitcoin's 3,800 USD ingangove iri pasi pekudonha kwemusika. Mushure mekupera kweBitcoin (1-2 mwedzi gare gare), musika wakatanga kupora zvizere. Mushure mekumiswa kwehafu, nekuda kwemawere Kuderera kwemari kunozotutisa mafungu evashandi vemumigodhi, asi musika wekutengesa wezuva nezuva wakadzvanywa zvakapetwa kaviri pagore, uye "kufa kwemweya" kunotarisirwa kudzikira zvishoma nezvishoma. .
Zvisinei, vamwe vanhu muindasitiri vakaratidza kuti "nzvimbo dzakachengeteka" ipfungwa yechinyakare, asi tichifunga kuti Bitcoin ine musika wakakura uye kushomeka kwayo kwakasimba kwazvo kupfuura mamwe marudzi echinyakare, kudiwa kweramangwana kucharamba kuchikwira. Naizvozvo, mushure mekupunzika, Bitcoin ichapora nekukurumidza kupfuura yechinyakare zvinhu zveAmerica. Kubva pane ino maonero, Bitcoin inogona kuramba iine tarisiro irinani, asi kubva kune ano musika maonero, hapana njodzi yekuzvidzivirira.
Muchokwadi, mushure mekudonhera-kwenguva pfupi muBitcoin, mutengo uyu unokwezva kwazvo mukati nepakati nepakati, uye inogona kunge iri nzvimbo yekutanga yemusika wenzombe unotevera.
Bitcoin iri kuunganidza simba kune ramangwana nzombe musika
Chirevo chakaburitswa neBloomberg chakataura kuti Bitcoin iri kuwedzera simba kumusika wenzombe. Kunyangwe iwo musoro wenyaya yacho wakaratidza yakajeka bullish maonero- "Bitcoin Maturity Great Leap Mberi". Bloomberg anotenda kuti gore rino Bitcoin ichapedzisa iyo yakakosha bvunzo yekuchinjira kune quasi-mari senge goridhe.
Chirevo chakataura zvakateerana zvezvikonzero nei musika weBitcoin uchikura. Chirevo chakasimbisawo kuti "kana nhoroondo ichizoshandiswa seyambiro, Bitcoin iri kuwana mafuta akafanana nemusika wemasheya paunogadzirisazve."
Uye zvakare, Bloomberg akataura kuti Bitcoin negoridhe, zvinhu zviviri zvakachengetedzeka mumaziso evanhu, zvinotarisirwa kuti zvibatsirwe zvakanyanya kubva kunyonganiso yemusika ichangoburwa inopararira nedenda idzva rekorona.
Asi sekutaura kwemuongorori anozivikanwa we cryptocurrency, kana Bitcoin ikasvika pane imwe mutengo, zvinogona kukonzeresa musika, mune mamwe mazwi, mutengo wemari wakakwira.
Mugovera wekupedzisira, vateveri ve200,000 veTwitter uye mutengesi anonzi CryptoYoda akaburitsa yake yazvino tekinoroji yekuongorora akateedzana, maakatsanangura kuti Bitcoin musika musika unowanzo kudonha nekuda kwekuumbwa kwekukwira-kwakasangana wedge uye mapfudzi emapfudzi-maviri mabara emagetsi anotsanangurwa ne mabhuku ezvinyorwa-asi budiriro yaBitcoin yemadhora mazana manomwe nemakumi manomwe nemakumi manomwe nemashanu ichapidigura mamiriro ezvinhu aya, "kumanikidza zvikabudura kujekesa zvinzvimbo zvavo vachikurudzira shuwa kutenga idzi nzvimbo":
"Kubudirira padanho repamusoro kwakadaro kunotungamira kukuvharika kupfupi, uye huwandu hwemaodha ekutenga huchaendesa simba, kunyanya kana vatengi vatopinda nematanho epamberi ekudzivirira."
Izvo zvaari kuda kutsanangura ndezvekuti kana Bitcoin ikabudirira kupinda, zvinogona kuratidza kuti ikozvino kudivi rekutengeserana hakusi kuratidza kwepamusoro, asi maitiro ekubatanidza uye nekuenderera kumusoro, izvo zvinogona kusvika $ 8,000 kana kutokwira.
Avi Felman-mutengesi uye muongorori pa crypto asset fund BlockTower-akacherekedza maviri ehunyanzvi masaini neChishanu chapfuura izvo zvakanyatsoratidza kuti mitengo yeBitcoin ichakurumidza kugadziriswa:
Demark kuteedzana (Tom Demark Sequential) chiratidzo chenguva-yakatarwa, mune 3-mazuva chemwenje chati inoratidzika kuenderera kuverenga kuverenga kuteedzana kwekutengesa. Mamiriro ezvinhu akafanana akaitika mukati medu kaviri nguva apo mutengo wemari wakadzika pakati paKurume naZvita 2019, asi wakazosvika pamusoro pe $ 10,500 pakutanga kwegore rino.
Ethereum parizvino inoita kunge isingakwanise kupfuudza iwo makumi mashanu-mazuva uye mazana maviri-mazuva mavhavha anotama e3-zuva remwenje chati.
Pamusoro pezvo, DonAlt akataura kuti kunyangwe mutsetse wezuva richangopfuura wanga usingaratidze "kusimba kwakadzika", "yaive padyo zvakanyanya nekuratidzwa kweBitcoin pamusoro pe $ 10,000." Akaratidza kuti mutengo wemitengo yeBitcoin wanga wakasiyana neiyo munaKukadzi Kufanana mune yazvino chimiro.
Chirevo cheBloomberg "Bitcoin Maturity Jump" yakashuma kuti Bitcoin iri kugadzirira musika wakakura wemombe. Mumushumo, munyori akatsanangura pamusoro pehukama pakati peBitcoin neiyo S & P 500 index, goridhe, zero uye isina mubereko mitengo. Sekureva kweshumo, misika yemusika wemabhizimusi yakakurudzira shanduko yeBitcoin ku "goridhe redhijitari".
Muna 2020, zvichatongwa kuti Bitcoin inogona kuchinja kubva kune ngozi yekufungidzira pfuma kuva "goridhe yedhijitari". Kubva pamaonero ekusagadzikana, kusagadzikana kweBitcoin kunoratidzika kunge kwakadzikira, nepo kusagadzikana kwemusika wemasheya kwatanga kusimuka. Kuita kwakadai kwemusika kuchabvumidza vanhu vazhinji kuendesa mari kune yakavharidzirwa midziyo.
Post nguva: Sep-27-2020
btc mudziyo, mudziyo we bitmain, crypto yekuchera asic, antbox mudziyo, akashandisa michina yemigodhi yekristpto, antminer mudziyo,